admin – Page 259 – Shabakadda Amiirnuur
Gudoomye Ku Xigeenka Heliwaa oo Ka Badbaaday Qarax Weyn.
Gudoomiye ku xigeenka degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir ayaa maanta ka badbaaday fal isku day dil ah oo la doonayay in lagu khaarajiyo. Xilli uu marayay nawaaxiga Shineemo Cabdiwaayeel ayaa waxaa gaarigiisa lala bar tilmaameedsaday qarax weyn oo jugtiisa laga maqlay meelo badan waxaana wararkii ugu dambeeyay ay haatan sheegayaan […]
Shir Weyn oo Ay Yeesheen Beesha Abgaal Cismaan Iyo Xarakada Al-Shabaab (Suurad Iyo Sowt)
Shir Ballaaran oo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha Abgaal ayaa lagusoo gaba gabeeyay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Sh/dhexe. Kulanka oo ay soo agaasintay Xarakada Al Shabaab ayaa diiradda lagu saarayay kaalinta Beesha Abgaal Cusmaan ay ku leedahay halganka ka […]
Aqoonyahan Xassan FIyooke Cali oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in socdaalkii madaxweyne Farmaajo ee magaalada Garowe aanu ahayn mid micno sidaa u buuran sameynaya. Wuxuu sheegay in uu Garowe horey u booqday islamarkaana aanu jirin farqi weyn oo u dhaxeeya isaga iyo Gaas marka […]
Xog: Weeraro Iyo Dagaalo Maanta Ka Kala Dhacay Gedo, Hiiraan Iyo Sh/dhexe.
Weeraro iyo dagaalo kala duwan oo sababay khasaare ayaa maanta ka kala dhacay sadax gobol oo kala ah Hiiraan, Gedo iyo Sh/dhexe. HIIRAAN Hiiraan haddaanu ku horreyno waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada Xarakada Al-Shabaab iyo kuwa Xabashida Itoobiya kadib markii askarta Al-Shabaab ay dhabbaha u galeen kolonyo ciidamada […]
Qaraxyo Khasaare Geystay oo Ka Kala Dhacay Muqdisho Iyo Beledweyne.
Magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne waxaa ka dhacay qaraxyo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasoo lala beegsaday ciidamada dowladda federalka ah. Qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa miino waxaana lala eegtay gaari Cabdi bile ah oo ay saarnaayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda. Qaraxan oo ka dhacay agagaarka […]
Sawirro: Safiirka Itoobiya oo Farmaajo Kusoo Dhaweeyay Garowe.
Socdaalka uu Farmaajo ku tagay magaalada Garowe waxay dowladda Itoobiya si cad ugu muujisay in iyadu ka taliso Puntland halka C/wali Gaasna uu muujiyay in isaga iyo Farmaajo ay laba madaxweyne kala yihiin Puntland iyo Soomaaliya inteeda kalana ay laba dowladood kala yihiin. Sida aad ka dheehan kartaan sawirka kowaad […]
Xog Kasoo Baxaysay Qarax Ay Ku Le’deen Alpha Group oo Ka Dhacay Ceelasha Biyaha.
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaarihii ka dhashay qarax culus oo habeenkii xalay meel u dhow degaanka Ceelasha biyaha lagula beegsaday askar ka tirsan ciidamada Alpha Group oo si gaar ah uga amar qaata ajaanibta ku sugan xerada Xalane. Ugu yaraan 8 askari oo ka tirsan Alpha Group ayaa […]
Al-Shabaab oo Gubay Shirkadda Safaricom Ee Wajeer.
Askar ka tirsan ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa weerar ka geystay Wajeer oo kamid ah dhulka Soomaalida ee la heysto iyagoo beegsaday xarumaha dowladda Kenya ee halkaasi ku yaalla. Wararka horudhaca ah ayaa sheegaya in si gaar ah loo beegsaday degaanka ay Kenyaatigu ula bexeen Katulu halkaas oo lagu gubay shirkadda […]
« Previous 1 … 257 258 259 260 261 … 277 Next »